Akhriso: 9 Marxaladood oo uu maro xiriirka aad u qaado qofka aad jeceshay | Gaaloos.com
Home » galmada » Akhriso: 9 Marxaladood oo uu maro xiriirka aad u qaado qofka aad jeceshay
Akhriso: 9 Marxaladood oo uu maro xiriirka aad u qaado qofka aad jeceshay
Noloshaada waxaad xiriir la sameyn kartaa dad badan oo kala duwan, dhamaantood dadka aad xiriirka la sameyneysidna waxay noqon karaan kuwo midba midka kale ka duwan yahay.
Laakiin waxaa jira sumaddo ama sifooyin yar oo ka duwan xiriir kastaa oo aad la sameyso guud ahaan dadka, sababtoo ah wuxuu kani gooni u noqonayaa shaqsi gaar ah.
Marxaladaha xiriirka Jaceylka Noloshaada.
Xiriirada la midka ah nolosha waxay leeyihiin marxalado u gaar ah, wuxuuna maraa marxalado kala duwan oo waqti iyo waddo dheer qaata.
Dhamaan marxaladahaasina waxay lamid yihiin sida adiga oo tijaabinaya awoodaada waafaqsanaan ee ad la leedahay midba midka kale.
Sagaal marxaladood oo uu xiriirka lamaanaha maro
Ma waxaad ku jirtaa xiriir cusub ? Mase Waxaad ku jirtaa xiriir sanadeed “xiliyeed” oo aad qof kale u heysid ? mas xiriir sanado badan qaatay?
Micno malahan waqtiga dheer ama gaaban ee xiriirkaadu uu socdo, maxaa yeelay dhamaan xiriirada waxay marayaan sagaalkan marxaladood midkood, waxaadna kadib halkan aad ka heli doontaa nooca uu yahay xiriirkaada.
1 Marxalad Kooban..tani waa marxalada koowaad oo xiriir walbaa lagu arkaa wuxuu inta badan ku bilowdaa soo jiidasho iyo xadi aan la ilaalin kari.
Lamaanaha waxay noqon karaan kuwo kaliya isku soo jiita dhanka Galmada, nooca xiriirkaan marka lagu gudo jiro waxay lamaanaha diirada saaraan waxyaabaha wanaagsan oo kaliya si aan loo kala tagin.
2 Marxalad isfaham ah...Marxaladaan marka lagu gudo jiro lamaanaha waxay bilaabaan iney isku bartaan si wanaagsan midba midka kale, waxay lamaanaha yeeshaan wada sheekeysi badan oo habeenidii dhaca.
Waxay inta badan lamaanaha ka sheekeystaan arimaha la xiriira dhanka qoyska, ruux kasta wuxuu jecel yahay, wuxuu neceb yahay iyo waxyaabaha kale ee la isku qariyo, waxayna nolosha markaa u muuqataa mid qurux badan oo raaxo ku dhisan.
3 Marxalada qaska (Rabshada)- Marxaladan waxya dhacdaa marka la eego seddex bilood kadib xiriirkoo koowaad iyo midkii labaad, Ma xasuusataa markii ugu horeysay ee aad dagaasheen ama aad wax isku qabateen lamaantaa/lamaanahaada markaasi kadib waxaad oganeysaa inaad ku jirteen marxalada rabshada.
4 Marxalada Fikrad abuurka:- Marxaladaan marka la joogo waxaad bilaabeysaan abuurida fikrado ku saabsan dhexdiina, haddii bilo idiin dhaafaan labadiina waxaad si dhab ah u ogaaneysaan xaqiiqada dhexdiina adinka oo fikradaha isku ogaanaya.
5 Marxalada Rukunka: Xiligan waxaad heysataa filooshinka rasmiga ee aad ka fileysid lamaantaada/Lamaanahaada, labadiina waxaad si adag iskugu dayaysaan inaad rukmataan buuxinta kaalinta laga doonayo ruux kastaa.
Marxaladaan waxaad labadiina aad bilaabeysaan inaad isi siisaan ama aad kala qaadataan wax walbaa oo aad isla jeceshihiin oo rukmasho ka dhigaya xiriirkiina.
6 Marxalada Farxada: Xiriirkaan markaad joogtaan waxaad ka gudbeysaan marxaladiiAfaraad waxaad labadiina si isku mid ah u badaleysaan fahamka dhexdiina ah iyo waxyaabaha aad iska fileysaan.
7 Marxalada kala Shakiga: Waxaa jira markaan oo kale sanado badan inaad xiriir lahaataan, waana shakiga uu ku bilowdaa marka lamaanaha ay isku qabtaan waxyaabo qofka kale uu dhibsado uuna arko astaamaha waxyaabaha uu ka shakisanaa.
Waxaad bilaabeysaa durba inaad ka fikirtaa xiriirkii hore, xiriirka hadda jira iyo waxyaabaha ad ka fileyso lamaantaada/lamaanahaada.
Marka marxaladaan aad ku jirto waxaad bilaabeysaa inaad la barbar dhigyo xiriirkaada xiriirada kale ee lamaanaha kugu dhow haddana shakiga kaama dhamaado.
8 Marxalada Buuqa:– Marxaladaan marka aad ku jirtaan waxaad bilowdaan inaad sii weynsaan marxaladii 7 ee kala shakiga ahaa, waxaana bilowday doodo iyo murun dhexdiina ah kaasi oo ah Shaki weynaaday.
9 Marxalada Is aaminaad Dhameystiran: Marxaladaan waa marxalada Farxada aad labadiina ku wada naalootaan, waxaad labadiina isku aamintaan si dhab ah waana marxaladii ugu dambeysay ee looga nasanayay marxaladihii walaaca badnaa.
Title: Akhriso: 9 Marxaladood oo uu maro xiriirka aad u qaado qofka aad jeceshay